Wararka Maanta: Arbaco, May 22, 2013-Isbitaalka Shifo oo ka mid ah Isbitaallada uu Turkigu ka Hirgeliyay Muqdisho oo Kumannaan Ruux lagu Daweeyay
Isbitaalkan ayaa ka daweeyay dadkaas faraha badan dhaawacyo iyo xanuunno kala duwan oo asiibay, waxaana maalin walba ay daweeyaan boqolaal qof oo Soomaali ah. Iyadoo isbitaalkan ay yaallaan 66 sariirood oo bukaannada xalaadoodu daran tahay la seexiyo.
Madaxa mashruucan, Seyda Sever ayaa sheegtay in dhamaan howlahooda ay ku qabtaan si lacag la’aan ah, kuwaasoo ay ku jiraan qalliinno ay qaar ka mid ah bukaannada ku sameeyeen iyadoo aan lacago laga qaadin.
“Inta badan dadka isbitaalkan daweynta u soo doonta waa kuwa ku nool xeryaha barakacayaasha ee Muqdisho ku yaalla,” ayay tiri Sever oo intaas raacisay: “Ma jiro wax dhaqaale ah oo isbitaalkan ka helno uma sameyn in aan dhaqeel ka helo. Ujeeddadeennu waa inaan caawino dadka Soomaalida ah oo keliya.”
Sever waxay sheegtay in dhammaan dhaqaatiirta ka howlgala Isbitaalka Shifa ay yihiin kuwo si mutadawacnimo ah ku shaqeeya, waxayna diyaar u yihiin inay caawiyaan dadka kaalmada caafimaad u baahan.
“Dhaqaatiirtu waxay sameeyaan toddobaadkiiba 50 illaa 60 qalliin, in laga shaqeeyo Soomaaliyana ma ahan mid fudud. Runtii waa mid aad u adag. Weerradii argagaxisada way laba jibaarmeen. Maalin walba waxaan si dhib kusoo markaan inta u dhexeysa guryaha aan deggennahay iyo isbitaalka. Dadka caafimaadka u imaanaya isbitaalkana waan iska baarayaa, waayo waxaan ka baqaynaa weerarro argagaxiso,” ayay Sever hadalkeeda ku dartay.
Ugu dambeyn, sarkaaladdan waxay sheegtay inay xusuustaan in kolonyo ay wateen shaqaale ka tirsan Turkiga oo qarax lagula beegsaday Muqdisho lagu dilay darawal Soomali ah, iyadoo xustay in Soomaalidu ay og yihiin in dadka Turkiga ah ay dalkooda u joogaan inay caawiyaan.